Sawirro: Madaxweyne Farmaajo oo booqday ciidamo ku wajahan furimaha dagaalka - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Sawirro: Madaxweyne Farmaajo oo booqday ciidamo ku wajahan furimaha dagaalka
Sawirro: Madaxweyne Farmaajo oo booqday ciidamo ku wajahan furimaha dagaalka
October 21, 2017 October 21, 2017 Saadaq Laki458
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabullaahi Farmaajo ayaa gaaray xarunta tababarka ciidamada ee Jasiira, halkaas oo cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka ay ka wadaan diyaar garow iyo ambabax ku aaddan dagaal ka dhan ah Al-shabaab.
Madaxweynaha ayaa dul istaagay abaabulka ay ku jiraan ciidamadu waxa uuna kula dardaarmay in ay laba laabaan dadaalka ay wadaan si ay u ciil tiraan umadda Soomaaliyeed ee la gumaaday, gaar ahaan qoysaskii lagu dhibaateeyey qaraxii Soobe.
“Waxa ay ogaandoonaan in shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin geesiyaal si deg deg ah uga jawaab celiya dhibaata kasta oo lagu sameeyo dadkooda. Waxaan tusinaynaa in aan diyaar u nahay in aan u hurayno nafteenna iyo maalkeena badbaadinta dadkeenna iyo dalkeenna.”
Saraakiisha iyo ciidanka ayaa Madaxweynaha u xaqiijiyey sida ay uga go’antahay in ay soo afjaraan khatarta argagixisada Alshabaab ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed iyagoona ugu baaqay dhammaan shacabka in ay garab ku siiyaan dagaalkan.
“Bilihii ugu dambeeyey waxaa aan u diyaar garoobaynay maanta oo kale, waana la joogaa. Mudane Madaxweyne, Ciidanka Xoogga Dalku waxa ay sugaayaan oo kaliya waa amarkaaga iyo in aad na tiraahdo ku dhaqaaqa cadowga.” Ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha xarunta.
Dowlad Goboleedyada oo War-Murtiyeed Soo saaray
Pep Guardiola: “Sergio Aguero waa ciyaaryahan qaas ah”
3 Qof oo Tareen ku dilay Koofurta London (Sawirro)
Ciidamo Soomaali iyo Ajnabi isugu jira oo ku wajahan Xarardheere
Afgooye: Qarax lala eegtay Ciidamo ka tirsan Dowladda